किन बढ्दै छ पराजित उम्मेदवारले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने क्रम ! - Everest Dainik - News from Nepal
किन बढ्दै छ पराजित उम्मेदवारले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने क्रम !
काठमाडौं, पुस १३ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारले आफ्नो पक्षमा मतपरिणाम नआएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गर्ने क्रम बढेको छ ।
सर्वोच्चमा दायर भएका सबै रिट हाल विचाराधीन अवस्थामा छन् । कुनै रिटमा पुनः मतगणनाको माग गरिएको छ भने कुनैमा पुनः मतदानको माग गरिएको छ । सबै रिट निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर भएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस प्रधानन्यायाधीश राणाद्वारा पदभार ग्रहण; न्यायाधीश जोशीलाई राजिनामा दिन आग्रह
याे पनि पढ्नुस माइतीघर मण्डाललाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट